Akhri:- Taliyaha ciidanka Xogga dalka Soomaaliya oo amray in garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay ka soo degto lacagta Imaraadka Carabta iyo halka loo waday oo muran ka jiro – Madal Furan
Hoy > Warka > Akhri:- Taliyaha ciidanka Xogga dalka Soomaaliya oo amray in garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay ka soo degto lacagta Imaraadka Carabta iyo halka loo waday oo muran ka jiro
Akhri:- Taliyaha ciidanka Xogga dalka Soomaaliya oo amray in garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay ka soo degto lacagta Imaraadka Carabta iyo halka loo waday oo muran ka jiro
Muqdisho (Madal Furan) – Ciidamadda amaanka ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaaladda Muqdisho ayaa waxay ku qabteen boorsooyin lacago doolar ahi ka buuxaan.
Lacagahan ayaa la sheegay in dowladda Imaaraadka Carbtu ay u soo daabushay gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ka dhashay muran xoog weyn oo hareeyey dowladdaha Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Lacagtan ayaa lagu sheegay tiradeeda ay gaareyso 14 Milyan oo doolar, taasoo dowladda Imaaraadku ay ku sheegtay in loogu tala galay mushaharka ciidamadda ay tababaraan ee Puntland, Galmudug iyo Muqdisho.
Haseyeeshee, imaasha lacagtan ayaa ku soo beegmatay xili ay golayaasha dowladda Federaalka Soomaaliya la daalaa dhacayaan khilaaf dhexdooda hareeyey, waxaana jira tuhun xoog leh oo Siyaasiyiinta qaarkood ka qabaan in lacaghan ay dowladda Imaaraadku ugu tala gashay in ay ku burburiso hadafka siyaasiyiinta ka soo horjeeda qorshaha dowladda Imaaraadka.
Lacagtaas ayaa la sheegay in la dhigay Bangiga dowladda Dhexe si halkaas loogu xafido inta ka horeysa xaqiijinta lacagtaasi halka ay ku wajahan tahay.
Warar ayaa sheegaya in Safiirka dowladda Imaaraadka Carabta uu ka codsaday Taliyaha ciidanka Xogga dalka Soomaaliya S/gaas C/weli Jaamac Gorod in loo soo fasaxo diyaarad sida lacag iyo raashin loogu tala galay ciidamada ay tababaraan, diyaaradaas oo uu sheegay inay uga imaan doonto dhinaca magalaada Boosaaso.
Haddaba Taliyaha ayaa wuxuu qoray warqadan uu kaga jawaabayo codsiga Safiirka Imaaraadka.
Wasiirka Maaliyadda XFS oo sheegay xiliga Soomaaliya deymaha laga cafin doono.
Iskahorimaad Garoowe ku dhex maray ciidamadda amniga kooxo khamrada ka ganacsada